I-Semalt: Yintoni yokuCoca? Iintlobo ezi-4 ze-Web Content ezifakwe kwi-Net
izixhobo. Abaninzi be-webmasters kunye neeblogi bekhusela umxholo wabo phantsi kwemithetho ye-copyright, kwaye ukuthumela ulwazi olubiwe njengento yokuqala yilephulo-mthetho!
Ngelishwa, umxholo wewebhu uphawulwa ngeenjongo ezingathandabuzekiyo nezingekho mthethweni njengezobuqhetseba bezentengiselwano, ukuhlambalaza kunye nokwabiwa kwedatha. Nangona kunjalo, iinjongo ezisemthethweni neenenekayo zokwakheka komxholo kukungena kwedatha, ukuphathwa kokuqukethwe, ukufuduka kwedatha, ukukhwabanisa kwengqondo, ukuphathwa kwegama okanye ukuhlaziywa kwezoshishino.
Iintlobo ezine ezihlukeneyo zomxholo ezifakwe kwi-intanethi:
Abanye abaphathi bewebhu kunye neebloggers basebenzisa umxholo kwiiwebhusayithi ezihloniphekileyo kunye neeblogi, becinga ukuba ukwandisa umthamo wamaphepha kwiindawo zabo kukulungele ukukhangela zikhundla ze injini. Kwaye, inyaniso, nayiphi na into iyakwazi ukutshatyalaliswa, kodwa ezine ezineentlobo eziphambili zezinto ezichaziweyo zikhankanywe ngezantsi.
1. Abavakalisi bedijithali kunye neenkcukacha:
Abavakalisi bedijithali kunye neenkcukacha ze-intanethi bahlala bejoliswe ngabaprojekthi kunye nabaphuhlisi, abajolise ukukrazula umxholo kulezi ziqonga kwiiblogi zabo zangasese. Yell. umzekelo onjalo. Lo mnikezeli wenkonzo ye-intanethi kunye ne-intanethi ye-intanethi uye wafumana impumelelo enkulu kwiinyanga zangezangoku. Uninzi lweziqulatho kweli sayithi liye lahlulwa, kwaye abagaxekile bahlala bekhangela iindlela zokwenza amaphepha amaninzi. Ngokufanayo, iManta yiwebhusayithi edumileyo apho iimveliso ezingaphezu kwezigidi ezingama-20 zibhaliswe ngokwazo ngenjongo yokuthengisa. Ngelishwa, uninzi lwequlatho lwalo luye lwahlulwa, kunye nenani elikhulu lebhobho lisetyenziselwa le njongo.
Kwiminyaka emininzi edlulileyo, ii-arhente zezindlu zepropati zihlaselwa ngumxholo wokuhlambalaza, kwaye ukubuyiswa kweendleko kubiza ngaphezulu kwe-10 yezigidi zeedola.
Kubonakala ngathi umxholo ophantse kuwo onke ama-portal ahambayo. Ezi nkampani azinikezeli kuphela ulwazi malunga neendawo ezilungileyo kwihlabathi kodwa zibonelela ngeenkonzo zokuhamba kubathengi babo. Iindawo ezihambahambayo zijoliswe lula kwizinto eziqingqiweyo. Ezinye zee-arhente ezikhokelayo ezisemngciphekweni yiKayak, i-TripAdvisor, i-Priceline, i-Trivago, i-Expedia kunye ne-Hipmunk. Bakhele amabhangi-mesha-bhridi-dollar angama-dollar, kwaye umxholo wabo udlalwa kwaye uphinde usetyenziswe kwiiwebhsayithi ezincinci kunye neeblogi.
Kuyinyaniso ukuba umxholo we-e-commerce indawo ayikwazi ukukhwabaniswa kalula, kodwa iiwebhusayithi ezinjenge-eBay ne-Amazon zisacatshulwa ngeenkcukacha zexabiso kunye nemveliso Source .